fanamboaranalogicielpocketpc [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/d/dab53fab83b9c31bf23502b39f45ad9e.xhtml failed
06/06/2005 Mpanoratra : RTN
Fanamboarana Logiciel Pocket PC (VS.NET)
Ohatra tsotsotra izay ahaizana manamboatra programa hoan’ny pocket PC , mampiasa ny fitaovana Visual Studio.Net (VS.Net).
Hanombohantsika azy dia velomy ny fitaovana VS.Net, rehefa vita zany dia midira amin’ny “Menu” Fichier/Nouveau/Projet dia misy varavarakely misokatra eo, toy ny sary etsy ambany, ka safidiano izay langage manavanana hanao etsy ankavia, Projet Visual C# zao no noraisinay eto, ary etsy ankavanana kosa dia Application Smart Device, dia omeo zay anarana tianao.dia tsindrio ny bokotra OK.
Avy eo dia misy varavarankely hafa misokatra indray, eo ambony misy ny fitaovana PDA, ka Pocket PC no ampiasaintsika eto, ary eo ambany misy ny karazana projet dia Application windows no alaina.toy ny asehon’ny sary eto ambany izao.
Dia tonga eo amin’ny toerana fanamboarana logiciel amin’izay isika, dia ohatra ny manao visual basic reny, dia asio bokotra ,soratra sns izay tianao, sary etsy ambany moa dia bokotra no nataonay sy nanova ny lohaten’ny varavarakely.
dia velomy amin’izay ilay logiciel PPC, amin’ny alalan’ny tendry F5. dia tokony hisy varavarakely misokatra avy eo manontany hoe " Emulateur Pocket PC 2002 " raha hampiasa Emulateur, ary " Peripherique Pocket PC " raha manana Pocket PC efa mifandray amin’ny Solosainanao ianao.
Dia refa vita ny safidinao dia tsindrio ny bokotra Deployer dia raha emulateur no nosafidianao dia toy izao varavarakely zao no miseho.
Misy fomba hafa koa raha tia hisafidy fitaovana PDA na emulateur, dia miditra ny menu “Outils/se connecter au peripherique...”
Raha ohatra indray ka en reseau ilay Pocket PC fa tsy miraikitra USB dia izao no fomba hatao, alaivo ny adresse IP ilay PPC, dia tapeo ao amin’ny menu Outils/Options misy varavarakely misokatra, dia amin’ny havia Outils de Peripherique/Peripheriques. Avy eo amin’ny havanana misy hoe Transport dia hataovy Transport TCP Connect dia tsindrio ny bokotra Configurer dia soraty ao ny adresse IP ilay PPC. Toy ny sary etsy ambany :
fanamboaranalogicielpocketpc.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43